“ဂျပန်တစ်ယောက် ပြောပြတဲ့ မာနကြီးလှတဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ အကြောင်း” – စွယ်စုံသုတ
“ဂျပန်တစ်ယောက် ပြောပြတဲ့ မာနကြီးလှတဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ အကြောင်း”
#ကျွန်တော်မိတ်ဆွေ ဂျပန်တစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ်.။
မင်းတို့မြန်မာတွေက သိပ်မာနကြီးတယ် ပြောပါတယ်.။
မေး။ ။ ဘယ်မှာမာနကြီးလို့လဲ?
ဖြေ။ ။မြန်မာပြည်မှာ လူတစ်ယောက်က အမှားလုပ်လိုက်တယ်ဒါကို ထောက်ပြကြည့် အဲဒီလူက သူ့အမှားတစ်ခုအတွက် အကြောင်းပြချက် ၁၀ခုလောက်ကို မ
နားတန်းပြောပြလိမ့်မယ်.။ဒါပေမဲ့ မတောင်းပန်ဘူး,မဝန်ခံဘူးသူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို အကျမခံဘူးဒါက မာနကြီးတာပေါ့.။
အလုပ်သမားက အမှားလုပ်လိုက်မယ်..ဆူလိုက်ကြည့် နောက်နေ့အလုပ်မလာတော့ဘူး,..အလုပ်သစ်သွားရှာမယ်,အလုပ်လေးတစ်ခုအတွက်လောက် သိက္ခာအကျခံပြီ မတောင်းပန်ဘူး,..အဲဒါ မာနကြီးတာပေါ့.။
ရန်ကုန်မြို့ကြီးက ကားလမ်းတွေ ပိတ်နေတယ်,ကားတွေမောင်းလို့ မရဘူး,တကယ်တန်းကြည့်ကြည့်ပါ,ရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေတဲ့ကားအရေအတွက်နဲ့ လမ်အနေအထားအရ ကားလမ်းက ဆိုးဝါးစွာ မပိတ်သင့်သေးပါဘူး။
သို့သော် လမ်းတွေက ပိတ်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ,ရှင်းရှင်းလေး ပြောရရင်မြန်မာပြည်က ယာဉ်မောင်းတွေက တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အပြန်အလှန် ဦးစားပေးဖို့ မစဉ်းစားကြဘူး,။တဖက်သားကို ဦးစားပေးလိုက်တာနဲ့ အလျော့ပေးလိုက်တာနဲ့ ကိုယ်က သိက္ခာကျသွားမယ်လို့ယူဆကြလို့လားမပြောတက်ဘူး,။
ပိတ်ပြီမောင်းရတာနဲ့ တဖက်သားက ဝင်လာမှာစိုးလို့ကိုယ်က သွားလို့ရရ မရရ တဖက်သား မောင်းမရအောင် ပိတ်ပြီးမောင်းကြတာနဲ့ လမ်းတွေက ပိတ်ကုန်ပြီ အချိန်အလဟသကုန်,ဆီတွေအလဟသ ကုန်ကြရတာ,။
လမ်းမှန်,ဦးစားပေးဖြစ်လို့ကတော့ တိုက်ပစ်လိုက်မယ်,လျော်ခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ အရှိန်တောင်တိုးပြီ မောင်းပစ်ကြတာတွေ့ဖူးကြုံ ဖူးကြမှာ အသေအချာပါ.။မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ယာဉ်တိုက်မူများက မှန်တယ်ထင်တဲ့ ယာဉ်မောင်းများကြောင့် ဖြစ်တာများပါတယ်။
ယာဉ်တိုက်မူဖြစ်ပြီး သေကြကြေကြ ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှူံးကြတာလည်းမနည်းပါဘူး,။အလုံးစုံအာမခံ ဝင်ထားတာနည်းပြီးကိုယ့်ဖြစ်ကိုယ့်ခံဆိုတဲ့အနေအထားမှာတောင် ဘယ်ကောင်မှ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့ မာနနဲ့ တိုက်ကြခိုက်ကြပြီးဘဝတွေ ပျက်စီးကုန်တာလည်း တလွဲမာနကြောင့်ပါပဲ.။
ဂျပန်မှာဆို ယာဉ်တိုက်မူဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ် ဆိုတာနဲ့ပဲ ရှက်ပြီးထုက်မပြောရဲကြပါသော်လည်းမြန်မာပြည်က ယာဉ်မောင်းများကတော့ ဘယ်တုန်းက ဘယ်လို တိုက်ပစ်လိုက်တာ,ဘယ်နဲ့ခါ တိုက်ဘူးတယ်ကွဆိုပြီးယာဉ်တိုက်မူပြစ်မူကိုတောင် ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ပြောဆိုနေကြတဲ့အထိ မာနကြီးကြပါတယ်.။
ယာဉ်တိုက်မူကို နောင်မဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်မယ်ဆိုတာထက် ဂုဏ်ယူမူက မြန်မာပြည်ရဲ့ ယာဉ်တိုက်မူကို တိုးပွားစေတဲ့ အချက်တချက်ပါပဲ.။
ဂျပန်ပြည်မှာဆို ဌာနဆိုင်ရာ တခုခုမှာပြသာနာဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲက အများရှေ့မှာဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတာဝန်ခံ အလုပ်ထွက်ပြကြပေမဲ့
မြန်မာပြည်မှာတော့ တောင်းပန်တာမျိုး တခါမှ မရှိခဲ့အောင် မာနကြီးခဲ့ကြပါတယ်.။
နောက်တချက်က ဌာနဆိုင်ရာ အချင်းချင်းကလည်း အပြိုင်အဆိုင်မာနကြီးကြတဲ့ အချက်အလက်အဖြစ့်ပြောပြတာကတော့လမ်းမပေါ်ကို ရောက်နေတဲ့ ဓာတ်တိုင်ကြီးများဖြစ်ပါတယ်.လမ်းတံတားက လမ်းခင်းတာတွေ လမ်းချဲ့တာတွေ လုပ်ကြပါတယ်.လမ်းတွေချဲ့တော့ မူလဓာတ်တိုင်တွေက လမ်းမပေါ်ရောက်ကုန်ပါတယ်,။
တကယ်တန်းကျတော့ လမ်းချဲ့ဖို့စီစဉ်ချိန်မှာ လမ်းတံတားနဲ့ လျှပ်စစ်ဌာန ရေဌာနတို့က အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်ပြီး သတင်းဖလှယ်ပြီးလုပ်ကြမယ်ဆိုရင် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အစီအစဉ်ကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင် ကောင်းမွန်ပြီးငွေအကုန်အကျလည်းနည်းပြီး တခါတည်း ကိစ္စပြတ်ဆောင်ရွက်လို့ရပေမဲ့ ဌာနဆိုင်ရာတွေကလည်း မာနကြီးကြပြီးအမေးအမြန်းအခေါ်အပြောနည်းကြတော့ တစ်ဌာနကလုပ်သွားပြီး တစ်ဌာနက ကျန်နေတဲ့ပြသာနတွေက နေရာအနှံ့မှာ တွေ့နေရတာကလည်းမာနကြီးကြလို့ မဟုတ်ဘူးလား?
ငါမှန်တယ် ငါ့ပစ္စည်း ငါ့အာဏာ ငါ့လူဆိုတဲ့ “ငါ့မာန”တွေကို လျော့ကြဖို့လိုပါပြီ.။
#Credit Thein Aung Chen..
ျမန္မာသည္ မဟုတ္တာကို အလြန္ႂကြားဝါခ်င္လွ၏ ေရခဲေသတၱာ ကို ဧည့္ခန္းတြင္ထားခဲ့ၾကသည္
မြန်မာ မိန်းခလေးတွေ မတိုးတက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅ ) ချက်